Ho Avy Tsy Ho Ela Ao Etazonia ny Fanairana Amin’ny Smartfinday Rehefa Misy Fandraofana Mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2017 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Español, Magyar, Italiano, Français, čeština , 繁體中文, 简体中文, English
Ity tantara avy amin'i David Leveille ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 28 Febroary 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Ity angamba no sombina torohevitra laharana voalohany atolotr'ireo mpikatroka ho an'ireo mpifindramonina tsy manana taratasy miisa 11 tapitrisa monina ao Etazonia, izay maro amin'izy ireo no matahotra ny ho vaoroaka. Raha tonga mandondòna ao aminao tsy misy taratasy ara-dalàna [didim-pitsarana] ny polisy, dia manan-jo tsy hamoha varavarana ny mponina ao Etazonia.
Mangataka fitadiavana mpiasa manampahefana fanampiny miisa 10.000 hisahana ny fifindramonina ny didim-panjakana navoakan'ny filoha Donald Trump tamin'ny volana Janoary. Fara fahakeliny, tetikasa iray an'ny Trano Fotsy, azon'ny Associated Press ary navoakany ampahibemaso no nampiseho fa mihevitra hanaparitaka andiana Mpiambina Nasionaly miisa 100.000 ny Departemantan'ny Fiarovana ny Tanindrazana (Minisiteran'ny Atitany) hisambotra ireo mpifindramonina an-tapitrisany tsy manana taratasy ao amin'ny firenena Amerikana miisa 11. (Nolavin'ny Trano Fotsy izany tatitra izany.) Izany karazana paikady izany dia azo antoka fa ahitana bemidina eny amin'ny toeram-piasana tahaka ny orinasa sy ny toeram-pambolena mampiasa mpifindramonina, ary ny toerana maro misy fihaonan'ireo mpiasa isan'andro. Mety ho tafiditra amin'izany ihany koa ny sakan-dalàna itakiana amin'ireo saofera ny ampisehoana taratasy fahazoan-dalana hitondra fiara sy ny taratasy famantarana azy ireo mba ahafahany manohy ny lalana. Mihevitra i Mireles fa mety hitarika amin'ny fanaovana “bemidina miafina amin'ny alalan'ny fandehanana an-tongotra eny amin'ny faritra manodidina ” ireo mpiasan'ny fifindramonina.
Efa dondona sahady ireo mpiserasera hitroka ny fampiharana, hoy i Mireles. Misy ireo manoro hevitra fa tokony ho hita amin'ny teny maro hafa ny fanairana bemidina fa tsy amin'ny teny Espaniola ihany, mba ho azo ampiasan'ny mpifindramonina araka izay betsaka indrindra. Eo amin'ny 13 isan-jaton'ny mpifindramonina tsy manan-taratasy no avy amin'ny firenena Aziatika, araka ny tombatombana avy amimn'ny Ivon-toeran'ny Politika Fifindramonina. Manasa ireo mpandika teny an-tsitrapo ny RedadAlertas mba hanampy hanitatra ny fidirana amin'ny fampiharana. Rindrambaiko malalaka ihany koa izany.